नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा समझदारी : लगानी र सहकार्यको क्षेत्र « palpalko
Published on:7October, 2019 6:37 pm
२० असोज । नेपाल र चीनबीचको सदियाैँ पुरानो सम्बन्धलाई जोड्ने नयाँ आयाम समयक्रमसँगै थपिँदै गएका छन् । करीब दुई दशकपछि चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्व नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यही असोजको अन्तिम साता गर्न लाग्नुभएको नेपाल भ्रमणलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसका अलावा दुई देशबीच आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वाणिज्य क्षेत्रमा थप मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
सुखदुःखको भरपर्दो मित्रका रुपमा चीनले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकासका लागि यसअघि महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको छ ।
सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने लक्ष्यका साथ समझदारी भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ । सोही क्रममा चिनियाँ कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् ।
कोही बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छानिएर निर्माणमा सहभागी भएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नाम कमाएको चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको समेत विस्तार गरेका छन् । त्यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायी तथा कामदारसमेत दक्ष हुन पुगेका छन् ।
नमोबुद्धको एम्बुलेन्स दुर्घटना : उपचार गर्न ल्याएकी श्रीमतीको शव लिएर फर्केका श्रीमानको दुर्घटनामा मृत्यु
५ कात्तिक, काभ्रेपलाञ्चोक– नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ५ मा भएको एम्बुलेन्स दुर्घटनामा घाइते भएका सिराहाका
५ कात्तिक, काठमाडौं– राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धिमाथि
काँग्रेस नेता कँडेल नेपाली कि भारतीय ?
५ कात्तिक, काठमाडौं – रौतहटमा हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका सांसद आफ्ताब आलमलाई पक्राउ
नेपाल सुरुङमार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गर्याे : प्रधानमन्त्री ओली
४ कात्तिक, काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सुरुङमार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्
रोकीराखेको मोटरसाइकललाई बोलेरोले ठक्कर दिँदा काफ्लेको मृत्यु
५ कात्तिक, काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेको बनेपामा रोकीराखेको मोटरसाइकललाई बोलेरोले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ
टेलिकमभित्रै कर्मचारीको जुवा खाल : सात जना प्रहरीको नियन्त्रणमा
५ कात्तिक, काठमाडौं– नेपाल टेलिकमको बबरमहल कार्यालयमा तास खेलिरहेका ७ जना कर्मचारी सहितको टोलीलाई प्रहरीले
युट्युबबाट गित हटाएर गायक दुर्गेश थापा हिरासतमुक्त
५ कात्तिक, काठमाडौं– प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका गायक दुर्गेश थापा आफ्नो विवादित गीत युट्युबबाट हटाउने सहमतिपछि